दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउन सरकार तयार, माधव नेपालले गरे यस्तो तयारी - News 88 Post
काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले निर्णय दिन नसक्दा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा नेपाल पक्षको निर्णयबिना हतार नगर्ने पक्षमा छन्।
यसो त एमाले एकता पनि अन्यौ’लमा परेको छ। नेपाल समूहले अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए मात्र पार्टी एकता हुने बताउन थालेको छ। तर, सत्तापक्षमा रहेको राजनीतिक दलले माधव नेपाललाई पार्टी फुटाएर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। मंगलबार माअ‍ोवदी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पमल दाहाल प्रचण्डले नेपाललाई भेटेरै यस विषयमा सुझाव दिएको बताइएको छ।
नेपालले नयाँ दल बनाएर सरकारमा सहभागी भएमा जस्तोसुकै सहयोग गर्न सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु तयार देखिन्छन्। तर उनीहरुको अनुसार, माधव नेपालले अहिलेसम्म नयाँ दल बनाउँछु भनेर मुख खोलेका छन्। तर ओलीसँग सँगै बस्ने अवस्था पनि उनले देखेका छैनन्। नेपालले एमाले फुटाएर अघि बढ्न चाहेमा सरकार हरके सहयोग गर्न तयार रहेको नेपाली कांग्रेसका एक नेता बताउँछन्।
तर, लामो समयदेखि आफूहरुलाई साथ दिएका नेताहरुले नेपालको साथ छोड्न थालेका छन्। घनश्याम भुसास, भीम रावल, गोकर्ण विष्टलगायतका नेताहरु एकताको पक्षमा देखिएका कारण माधव नेपाल अ’प्ठ्यारोमा परेका छन्। यसो त नेपालसँग दल विभाजन गर्न आवश्यक संख्या नपुग्ने भएकाले कानूनी सहयोग गर्न सरकार तयार हुने बताइएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (२) अनुसार दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य चाहिन्छ। तर एमालेको (निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको) २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र १२१ सदस्यीय संसदमा दलमा नेपाल समूहको ४० प्रतिशत छैन।
सत्तारुढ दलका एक नेताका अनुसार भर्खर सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेले संसदमार्फत दल विभाजनलाई सहज बनाउने यो ऐन संशोधन गर्न दिने सम्भावना छैन। त्यसैले यदि माधव नेपाल नयाँ दल गठन गर्ने निर्णयमा पुग्छन् भने उनलाई सहज हुने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने नेताहरु बताउँछन्। संसद पुनर्स्थापना र सरकार निर्माणमा नेपालको ठूलो सहयोग भएका कारण जति नै आ’लोच’ना भए पनि सरकारले राजनीतिक र कानूनी समाधान खोजिदिनुपर्ने तर्क सत्तापक्षका नेताहरुको छ।
बुझ्नै नसक्ने एमालेको राजनीति, महेश बस्नेत माधवको नयाँ पार्टीमा !
May 25, 2021 N88
नेपालमा पनि श’वदाह गृहमा श’वको लाइन, मूलगेट बाहिरै बज्यो एकोहोरो श’ङ्ख !
May 1, 2021 N88
अन्तरजातीय विवाह गरेको भन्दै छोरालाई बावुको अ’न्त्येष्टि गर्न दिइएन